FireCoin စျေး - အွန်လိုင်း FIRE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FireCoin (FIRE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FireCoin (FIRE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FireCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $131 851.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FireCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FireCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FireCoinFIRE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.152FireCoinFIRE သို့ ယူရိုEUR€0.129FireCoinFIRE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.117FireCoinFIRE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.139FireCoinFIRE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.36FireCoinFIRE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.962FireCoinFIRE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.38FireCoinFIRE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.569FireCoinFIRE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.202FireCoinFIRE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.213FireCoinFIRE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.4FireCoinFIRE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.18FireCoinFIRE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.828FireCoinFIRE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹11.39FireCoinFIRE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.25.65FireCoinFIRE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.209FireCoinFIRE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.232FireCoinFIRE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.73FireCoinFIRE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.06FireCoinFIRE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥16.27FireCoinFIRE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩180.3FireCoinFIRE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦58.4FireCoinFIRE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽11.24FireCoinFIRE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.19
FireCoinFIRE သို့ BitcoinBTC0.00001 FireCoinFIRE သို့ EthereumETH0.000397 FireCoinFIRE သို့ LitecoinLTC0.0028 FireCoinFIRE သို့ DigitalCashDASH0.00168 FireCoinFIRE သို့ MoneroXMR0.00171 FireCoinFIRE သို့ NxtNXT11.88 FireCoinFIRE သို့ Ethereum ClassicETC0.0225 FireCoinFIRE သို့ DogecoinDOGE43.96 FireCoinFIRE သို့ ZCashZEC0.00185 FireCoinFIRE သို့ BitsharesBTS4.69 FireCoinFIRE သို့ DigiByteDGB4.87 FireCoinFIRE သို့ RippleXRP0.541 FireCoinFIRE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00525 FireCoinFIRE သို့ PeerCoinPPC0.505 FireCoinFIRE သို့ CraigsCoinCRAIG69.42 FireCoinFIRE သို့ BitstakeXBS6.5 FireCoinFIRE သို့ PayCoinXPY2.66 FireCoinFIRE သို့ ProsperCoinPRC19.12 FireCoinFIRE သို့ YbCoinYBC0.00008 FireCoinFIRE သို့ DarkKushDANK48.89 FireCoinFIRE သို့ GiveCoinGIVE329.97 FireCoinFIRE သို့ KoboCoinKOBO34.71 FireCoinFIRE သို့ DarkTokenDT0.14 FireCoinFIRE သို့ CETUS CoinCETI440.02
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 00:35:02 +0000.